2 KỌRINT 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2KỌR 2)
2 KỌRINT 2
Nꞌihi na ntaramahụhụ unu nile kpebiri nye ya ezuola.
Ya mere, bikonụ, gosinụ ya na unu hụrụ ya nnọọ nꞌanya.
Ihe mere m ji dee ihe m dere nꞌakwụkwọ m nke mbụ bụ ka m chọpụta ma unu jikekwara mgbe nile irube isi ime ihe m nyere unu nꞌiwu.
Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọ bụla, mụ onwe m kwa ga-agbaghara onye ahụ unu gbaghara. Ọ bụrụkwa na m agbaghara onye ahụ, ana m agbaghara ya nꞌihi unu, na site nꞌike nke Kraịst nyere m.
Mgbe m bịarutere Troas ikwusa ozi ọma Kraịst, Onyenwe anyị megheere m ụzọ izisa ozi ọma.
Ma ekele dịrị Chineke, onye naedugharị anyị na-enye anyị mmeri, nꞌihi njikọ e jikọtara anyị na Kraịst. Ekele dịkwara Chineke onye na-eji anyị arụ ọrụ, ime ka onye ọ bụlạ nụrụ isisi ụtọ nke ozi ọma Kraịst.
Nꞌihi na nꞌetiti ndị ahụ Chineke na-azọpụta na nꞌetiti ndị ahụ na-ala nꞌiyi, anyị dị ka ụda na-esi isi ụtọ nke Kraịst naachụrụ Chineke.
Nꞌetiti ndị ahụ na-ala nꞌiyi, isisi ụtọ a bụ ihe na-ewetara ha ọnwụ, ma nꞌetiti ndị ahụ a na-azọpụta, ọ bụ isisi ụtọ a na-ewetara ha ndụ. Ma ọ dịghị mgbe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị dị ka ndị zuru oke ịrụ ọrụ dị otu a.
Nꞌihi na anyị adịghị ka ọtụtụ mmadụ ndị na-eji okwu Chineke azụ ahia. Kama anyị bụ ndị na-edebe onwe ha ọcha nꞌihu Chineke, ndị Chineke nꞌonwe ya họpụtara ịrụ ọrụ a. Anyị na-agba ama na-agwa ndị ọzọ ihe banyere ozi ọma a dị ka a ga-asị na anyị nọ nꞌihu Chineke eje ozi a, na dị ka ndị e jikọtara ha na Kraịst.
2 KỌRINT 2:6
2 KỌRINT 2:8
2 KỌRINT 2:9
2 KỌRINT 2:10
2 KỌRINT 2:12
2 KỌRINT 2:14
2 KỌRINT 2:15
2 KỌRINT 2:16
2 KỌRINT 2:17
2 KỌRINT 1 / 2KỌR 1
2 KỌRINT 2 / 2KỌR 2
2 KỌRINT 3 / 2KỌR 3
2 KỌRINT 4 / 2KỌR 4
2 KỌRINT 5 / 2KỌR 5
2 KỌRINT 6 / 2KỌR 6
2 KỌRINT 7 / 2KỌR 7
2 KỌRINT 8 / 2KỌR 8
2 KỌRINT 9 / 2KỌR 9
2 KỌRINT 10 / 2KỌR 10
2 KỌRINT 11 / 2KỌR 11
2 KỌRINT 12 / 2KỌR 12
2 KỌRINT 13 / 2KỌR 13